समाचार - नयाँ व्यापार अवसर? आज, इलेक्ट्रिक स्कुटर सडकमा हुन सक्छ!
आज, इलेक्ट्रिक स्कुटर सडकमा हुन सक्छ!
आजदेखि, दुई पाङ्ग्रे इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू सडकमा हिड्न अनुमति दिने युरोपेली सहरहरूको नियमलाई सन्दर्भ गर्दै, प्रान्तीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई सम्बन्धित नियन्त्रणहरू आफैंले खुकुलो पार्ने गरी प्रान्तमा पाँच वर्षे पाइलट योजना प्रवर्द्धन गरेको छ। सडक जाम कम गर्न र वातावरण संरक्षण प्रवर्द्धन गर्न। तर, कतिपय सडक सुरक्षा समुहहरु सुरक्षा निगरानीको अभावमा चिन्तित छन् र प्रदेश सरकारसँग थप परामर्श लिनुपर्ने र कार्यान्वयन गर्न हतार गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ ।
2019 को गर्मी मा, ओन्टारियो को सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक प्रान्तीय परामर्श शुरू गर्यो। दुई पाङ्ग्रा इलेक्ट्रिक स्कुटरप्रान्तमा ड्राइभिङ नीति, र नोभेम्बरमा घोषणा गरियो कि नयाँ वर्षको दिनबाट पाँच वर्षे पाइलट योजना सञ्चालन गरिनेछ। प्रान्तका स्थानीय सरकारहरूलाई आफैले छनोट गर्न र कानून बनाउन अनुमति दिनुका साथै शहरमा दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय स्कुटर चलाउन अनुमति दिनुहोस्, र तिनीहरूलाई भाडामा लिन र बाँडफाँड गर्न अनुमति दिनुहोस्।
प्रादेशिक यातायात विभागले पाइलट कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरेर बिस्तारै सडक जाम कम गर्ने, वातावरण संरक्षण प्रवर्द्धन गर्ने र विद्युतीय स्कुटरका लागि व्यवसायिक अवसरहरू खोल्ने आशा गरेको छ।
यद्यपि, ओन्टारियोमा असक्षम र स्वस्थका लागि गठबन्धनले प्रान्तीय सरकारले पाइलट योजना लागू गर्नु अघि बजारमा दुई पाङ्ग्रे इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूको सुरक्षा समस्याहरूलाई विचार नगरेको ठान्छ। गठबन्धनका अध्यक्ष डेभिड लेपोफस्कीले योजना सुरु गर्नु अघि सुरक्षा समस्याहरू ठीकसँग ह्यान्डल गर्न प्रान्तीय सरकारलाई लबिङ गर्ने आशा राख्छन्। उनी अहिलेको जस्तो नीति ल्याउँदैनन् तर दुर्घटनापछि त्यसको समीक्षा गर्न उत्सुक छन् ।
प्रादेशिक यातायात विभागले नयाँ कानून अन्तर्गत दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय स्कुटरले साइकल सरह उपभोग गर्न सक्ने बताएको छ। तिनीहरू सडकमा हिड्न सक्छन्, तर4किलोमिटर प्रति घण्टा भन्दा बढी हुन सक्दैनन्, र घण्टी बजाउने जस्ता सुरक्षा सुविधाहरूले सुसज्जित हुनुपर्छ।
प्रयोगकर्ताहरू कम्तिमा 16 वर्षको हुनुपर्छ
त्यस्तै, प्रादेशिक सरकारले विद्युतीय स्कुटर प्रयोग गर्ने व्यक्तिको उमेर कम्तीमा १६ वर्षको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि तिनीहरूको तौल 45 केजी भन्दा कम छ भने, तिनीहरूले हेलमेट लगाउन आवश्यक छ।
यातायात विभागका प्रवक्ता जेकब हेनरीले प्रान्तीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय स्कुटरहरूका लागि आफ्नै कानून बनाउन अनुमति दिएको बताए। उनले प्रयोगकर्ता र पैदलयात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्ने क्षमता स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले विश्वास गरेको बताए ।
ओन्टारियो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यात्रा गठबन्धनका अध्यक्ष लेपोस्की, जो एक दृष्टिविहीन व्यक्ति हुन्, प्रान्तीय सरकारले पायलट योजना लागू गरेकोले यसको नेतृत्व प्रान्तीय सरकारले गर्नुपर्छ, प्रयोगकर्ताहरूले इजाजतपत्र लिन र बीमा खरिद गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। यदि तिनीहरू फुटपाथमा अवैध रूपमा बस्छन् भने, तिनीहरूलाई स्थानीय सरकारले तानेर वा जफत गर्नुपर्छ।
विद्युतीय स्कुटर भाडामा लिने कम्पनीले दुर्घटनामा परेमा स्कुटर भाडामा लिने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने र भाडामा लिन सकिने स्कुटरको सङ्ख्या सीमित गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिशिगनमा सम्बन्धित दुर्घटनाको संख्यामा अप्रत्याशित वृद्धि भएको छ मिशिगनमा दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय स्कुटरलाई सडकमा हिड्न अनुमति दिइएको छ, तर स्थानीय अस्पतालको आकस्मिक विभागका डाक्टरहरूले यो कानून लागू भएदेखि टाउकोमा चोटपटक लाग्ने वा भाँच्नेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको स्वीकार गरेका छन्। कारण यो हो कि कानूनले 18 वर्ष भन्दा माथिका प्रयोगकर्ताहरूलाई हेल्मेट लगाउन आवश्यक छैन। उमेर वा तौल जस्तोसुकै भए तापनि विद्युतीय स्कुटरको प्रयोगलाई नियमन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने सरोकारवाला समूहहरू विश्वास गर्छन्।
कथन: यो पोस्ट उत्साही नेटिजन्सहरू द्वारा साझा र जारी गरिएको हो र यो प्लेटफर्मको स्थिति प्रतिनिधित्व गर्दैन। यदि तपाइँसँग कुनै आपत्ति वा संदिग्ध उल्लङ्घन छ भने, कृपया हामीलाई ईमेल मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्।